Streamland Media dia nanambara fikasana haka ny orinasa Technicolor aorian'ny Technicolor | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Streamland Media dia nanambara fikasana haka ny orinasa Technicolor aorian'ny Technicolor
Streamland Media, izay taloha Head Head Holdings LLC, dia nanao fifanarahana hahazoana ny orinasa Technicolor Post. Ity fanampiana ity dia miorina amin'ny tambajotran'izao tontolo izao an'ny talenta nahazo talenta nahazo an'i Streamland, manamafy ny fanoloran-tenany amin'ny famoronana, ny fanavaozana ary ny fiaraha-miasa ilaina amin'ny famokarana aorian'ny asa. Ny fahazoana, izay iharan'ny fepetra fanidiana mahazatra, dia tohanan'ny Trive Capital sy Capital Crowns Capital ary antenaina hikatona amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021.
ny foibeny ao amin'ny Los Angeles, Streamland Media dia miasa amin'ny alàlan'ny orinasam-pifaneraserana manerana an'izao tontolo izao, ao anatin'izany ireo mpitarika ny indostria Picture Shop, Formosa Group, Ghost VFX, Picture Head, The Farm Group, ary Finalé Post. Ireo orinasa miavaka ireo dia manohana endrika fialam-boly sarimihetsika, fizaran-tantara, fifanakalozan-kevitra ary vaovao amin'ny alàlan'ny fanomezana vahaolana ambony sy avo lenta amin'ny sary sy ny famaranana feo, ny effets visuels et ny marketing. Ny fanampian'ny Technicolor Post dia hanohana ny talenta malaza an'i Streamland ary hanitatra ny fomba tsy manam-paharoa hanatanterahana ny filan'ny mpanjifa any amin'ny faritra manerantany, anisan'izany i Etazonia, Kanada, Eropa ary UK.
Ny orinasan'ny Technicolor Post dia hatambatra ao amin'ny portfolio misy ny orinasa Streamland Media izay manana andraikitra fatratra. Tsy hisy fahatapahana ireo serivisy nahazo loka ho an'ny mpanjifan'ny Technicolor Post mandritra ity fampidirana ity, ary ny mpiasa rehetra natokana ho an'ny Technicolor Post dia ho anisan'ity fifanakalozana ity.
“Ny fanoloran-tenan'ny ekipanay ho amin'ny hatsarana famoronana sy ny zava-bitan'izy ireo miavaka dia namela an'i Streamland Media hanangana an'ity fianakavian'orinasa bizina miavaka ity,” hoy i Bill Romeo, CEO ao amin'ny Streamland Media. “Faly izahay fa manana ny kalitao miavaka an'ny mpanakanto Technicolor Post manatevin-daharana anay. Ny fanampiana ny teknolojia Technicolor Post sy ny toerana manerantany mankany Streamland dia hahafahantsika miara-miasa amin'ireo mpanjifanay rehetra amin'ny dingana lehibe kokoa. Faly aho amin'ny ho avy. ”
"Ny maodely Streamland dia mifototra amin'ny filozofia maharitra izay manome lanja ny kolontsaina mampiavaka azy ary mamporisika ny fiaraha-miasa isaky ny mandeha," hoy i David Stinnett, mpiara-miasa amin'ny Trive Capital. “Io no vato fehizoron'ny fahombiazan'ny orinasa izay tohananay amin-jotom-po. Faly izahay fa hanohy hanompo ny vondrom-piarahamonina aorian'ny famokarana miaraka amin'ny tolotra feno natao manokana hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa manerantany. ”
Jeffrey Schaffer, mpanorina sy mpiara-mitantana ao amin'ny Five Crowns Capital, dia maneho ny fihetseham-po. "Eo ambany fitarihan'ny ekipa mpanatanteraka Streamland Media sy ny birao, dia maminavina ho avy mamiratra izahay amin'ny fivoaran'ny famokarana aorian'ny famitana ity fifanarahana ity."
"Ny varotra stratejika Technicolor Post dia ampahany amin'ny vina maharitra ataonay ho an'ny Technicolor Production Services hifantoka amin'ny VFX sy ny sarimiaina ho an'ny indostrian'ny fialamboly, ny serivisy sy ny teknolojia famoronana ho an'ny indostrian'ny dokam-barotra, izay manome ny sandany farany ho an'ny mpanjifanay. Hifantoka hatrany amin'ireo faritra ifotony ireo izahay amin'ny alalàn'ny studio famoronana nahazoantsika loka The Mill, MPC, Andriamatoa X ary Mikros Animation, "hoy i Richard Moat, tale jeneralin'ny Technicolor.
Momba ny Streamland Media
Streamland Media, izay taloha dia Head Head Holdings LLC, miasa amin'ny alàlan'ny orinasa mpamokatra lahatsoratra manerantany, toy ny Picture Shop, Formosa Group, Ghost VFX, Picture Head, The Farm Group, ary Finalé Post. Ireo orinasa mifangaro ireo dia manohana endrika fialam-boly sarimihetsika, fizaran-tantara, fifanakalozan-kevitra ary misy ankehitriny amin'ny alàlan'ny fanomezana talenta ambony, fahaizana teknika ary vahaolana namboarina amin'ny sary sy ny famaranana feo, ny effets visuels et ny marketing. Manana foibe Los Angeles, Streamland Media dia manolotra toerana maro eran'izao tontolo izao manerana an'i Etazonia, Kanada, Eropa ary UK izay mifantoka amin'ny fanomezana fomba tokana sy isam-paritra hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa.
Technicolor dia mpitarika manerantany amin'ny famoronana sy fandefasana traikefa amin'ny fialamboly miavaka. Amin'ny alàlan'ny fampiraisana ny kanto mitarika indostrialy miaraka amin'ny fanavaozana kilasy eran'izao tontolo izao, ny orinasa sy ny fianakavian'ireo studio famoronana dia manampy ny mpitantara tantara hitondra ny fahitana tena fatra-paniry laza.
Previous: Evolve Technology dia manampy an'i Mo-Sys StarTracker amin'ny lisitry ny lisitra sy ny fiofanana
Next: Seminera Manolotra Fanadihadiana momba ny fampifanarahana ny fampianarana mozika ho an'ny COVID miaraka amin'i Dante mandritra ny NAMM 2021